यत्र, तत्र, सर्वत्र ओलीराज - सुसूचित नेपालको चित्र: Onlinepana
यत्र, तत्र, सर्वत्र ओलीराज
केही दिनअघि जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले एउटा ट्विट गरे । ट्विटमा उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हिटलरसँग तुलना गर्दै होशियार रहन आग्रह गरे ।
डा. भटराईको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लक्षित ट्विट र पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री ओली अब शक्तिशाली शासक बन्ने त होइनन भन्ने आशंका थपिएको छ । परिस्थितिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई यति सहयोग गरेको छ कि उनलाई नचाहँदा नचाहँदै तानाशाहको बाटो लाग्न बाध्य बनाएको छ । आफ्नै पार्टीभित्र अल्पमतमा परेकै बेला सर्वोच्च अदालतले पार्टी पुनःस्थापनाको आदेश दिएपछि संसद पुनःस्थापनाले खिईँदै गएका ओली झन शक्तिशाली बन्दै गए । पार्टी व्युँतिएसँगै संसदीय दलको विधान संशोधन गर्दै ओलीले कुनै पनि सांसदले पार्टी हितविपरीत गतिविधि गरे ६ महिनासम्म निलम्बन गर्ने, समानुपातिक सांसद हेरफेर गर्न पाउने अधिकार आफूमा निहीत गरे ।
निर्वाचन आयोग, अदालतलगायत संवैधानिक निकायमा पार्टीका तर्फबाट आधिकारिक पत्राचार गर्नेदेखि दलका उपनेता, राष्ट्रियसभामा दलका नेतालगायत चयन गर्नेसम्मको अधिकार आफैँमा ल्याए । एमाले भित्रको ७० वर्षीय प्रावधान हटाएर आफ्नो अनुकुल बनाए । विस्तारै आफ्नो विरोधमा लागेकालाई तह लगाउन कारबाहीको श्रृङखला सुरु गरे । चार नेतामाथिको कारबाही यसैको उपज हो । यतिमात्र होइन उनले बैठकबाटै निर्णय गराएर कुनै गुट वा नेतासँग डिल नगर्ने भनेका छन । अन्य नेता ओलीको तर्क काटन नसक्ने भएकाले ओली एक्लैको पद र पावरकापछि पार्टी मात्र होइन अन्य राजनीतिक दल पनि मौन बस्न बाध्य बनेका छन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल, हिजोको विरासत बोकेको नेपाली कांग्रेस पनि छ र भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
डा. आरजु राणाको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेर ओलीले आफू मातहतको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले काम सकेको समाचार सार्वजनिक गरेलगत्तै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकारको नेतृत्व गर्न तयार शेरबहादुर देउवाले विराटनगर पुगेर घोषणा गरे –‘अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउँदैनौँ, सरकार ढाल्ने खेलमा पनि लाग्दैनौँ ।’ देउवाको यो भनाइ आवेग भन्दा हतास मनस्थितिसँगको परिस्थिति थियो किनकी देउवा तिनै हुन जसले सत्ताका लागि जुनकुनै खेल खेल्न तयार हुन्छन । अन्यथा सत्ताका लागि उनैले स्थानीयतहको चुनावमा माओवादीलाई भोट हाल्न कांग्रेस कार्यकर्तालाई उर्दी जारी गरेका थिए ।
माओवादी त यति निरीह बनेको छ कि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको धम्की दिन्छ तर फिर्ता लिन सक्दैन । सदनका हरेक बैठकमा अनि हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा माओवादी नेताहरु ओलीको आलोचना गर्छन तर समर्थन फिर्ता लिन सक्दैनन । नेकपा नामको व्युँताउने गरी सर्वोच्चलाई आदेश पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदन पनि सर्वोच्चले खारेज गरेकै दिन माओवादीको अर्को निर्णय आयो – ‘सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने ।’ माओवादीको यस्तो अवस्था देखेर प्रधानमन्त्री ओलीले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा भनेका छन –‘म यति लोकप्रिय छु कि उहाँहरुले चाहेर पनि समर्थन फिर्ता लिन सक्नुहुन्न ।’
लोकप्रियताको मापन पद र पावर नै हो । हुनपनि अहिले प्रधानमन्त्री ओली यति शक्तिशाली भएका छन किअन्यको भूमिका गौण बनेको छ । गत पुस ५ मा ओलीले विघटन गरिदिएको संसद पुनःस्थापनाका लागि तत्कालीन नेकपा, कांग्रेस, जनता समाजवादीलगायतले आन्दोलन गरे । संसद पुनःस्थापना पनि भयो तर संसद पुनस्थापना जसले माग गरेका थिए, उनीहरुले नै बेवास्ता गर्न थालेका छन । संसद पंगु बन्ने बनाउने कामबाहेक सदनले विजनेश लिएर अघि बढन सकेको छैन ।
पछिल्ला ६ पटकका बैठकमा हरेक पटक झै सांसदहरुको गुनासो सदनलाई विजनेश चाहिने भन्ने हुन्छ । पछिल्लो पटक बुधबार पनि संसदमा धारणा राख्ने सांसदहरुले सदनलाई विजनेशविहीन बनाइएकोमा गुनासो मात्रै गरेनन, प्रधानमन्त्री किन संसद आउँदैनन भनेर पनि जानकारी माग गरे । तर सरकार तत्काल संसदलाई विजनेश दिएर अघि बढाउन चाहँदैन । एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भटटराईकाअनुसार हिउँदे अधिवेशन सकिनै लागेकाले सरकार अधिवेशन अन्त्यको तयारीमा लागेको छ । उनी भन्छन –‘बजेट अधिवेशन वैशाखतिरै बोलाउनुपर्ने भएकाले संसदको यो अधिवेशन अब चैत्र मसान्तभित्र अन्त्य हुन्छ ।’
संसदले प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल हटाउन नसक्ने आजसम्मको परिस्थितिले देखिएको छ । कांग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजाल भन्छन –‘ राजनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग बहुमत छैन तर प्राविधिक रुपमाअहिले ओलीको विपक्षमा पनि बहुमत पुग्दैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्तामा टिकिरहन जसले भाग्यले साथ दिएको छ । पछिल्ला दिनमा कामको जस लिन मौका दिएको छ । वर्षौंसम्म थाती आयोजना उनकै कार्यकालमा पूर्णता पाउँदै छन । ३० वर्षदेखि थाती रहेको मेलम्चीको पानी काठमाडौँबासीले धारामा पाएका छन । हुलाकी राजमार्ग निर्माण ९५ प्रतिशत पूरा भएको छ । थानकोट काठमाडौँ सुरुङ निर्माण सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंकै भनाईमा सरकारले विकासको मूल फूटाएको छ । रिपोर्टर्स क्लबको वार्षिकोत्सवमा प्रधानमन्त्रीले दाबी गरे – ‘टनेल बन्दै छ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा, तुईन हटाइयो, दिनमा १० किमी बाटो बन्दैछ । मेलम्चीको पानी झारिसक्यो । सुनकोशी मरिन डाइभर्सन शिलान्यास निर्माण कार्य प्रारम्भ भइसक्यो । हुलाकी राजमार्ग हामी जन्मिनुअघिको कुरा । अघिल्लो पटक आफैँले सुरु गरेको अहिले ९५ प्रतिशत सकियो । हामीले थुप्रो विकासका काम गरेका छौँ ।’
अहं अर्थात म । म अर्थात पावर । पावरको सुरुवात ओलीले प्रधानमन्त्री भएदेखि नै सुरु गरेका थिए । २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै रुचिअनुसार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ संशोधन गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीको मातहत राखिएका थिए । प्रधानमन्त्री तथ ामन्त्रिपरिषदकार्यालय मातहतभित्र ल्याएर निकायलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको तर्क त्यतिबेला गरिएको थियो । तर जुन अपेक्षाले ल्याइएको थियो, त्यस अनुरुप काम भने भएको छैन । प्रधानमन्त्री मातहतको निकाय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र कर्मचारी थन्क्याउने केन्द्र बनेको छ । कार्यसम्पादन गर्ने गरेका सरकार र मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन हराएको छ ।
कर्मचारीतन्त्रमा चरम हस्तक्षेप छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अलपत्र बनेको छ । भ्रष्टाचार सूचकांकमा अघिल्लो वर्षभन्दा बढोत्तरी भएको छ । अरु त अरु स्वास्थ्य महामारी कोभिडका बेला सरकारका मन्त्री अर्बको भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि मन्त्रीको सरुवात भयो तर छानबिन भने हुन सकेन । सरकारका कारोबार काबिल नै सार्वजनिक हुन छाडेका छन । शक्तिको केन्द्रीकरण अनि विरोधीले चाहेर पनि गर्न नसक्ने गतिविधिपछिको यस्तो अवस्थापछि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भन्छन – ‘नेपालको कार्यकारिणीमा सत्ताको उन्माद चढेको छ । सत्ताको उन्माद अझ विकृत हुँदै जाँदा बन्दुकको उन्मादमा पुग्छ ।’ पौडेलको आशंका तानाशाह शासक बन्न पुग्ने भन्ने देखिन्छ । तर विश्लेषकहरुले तानाशाहमा आफ्ना विरोध सुन्न नहुने गुण हुने बताउँछन ।
प्रधानमन्त्रीको स्वभाव यस्तो बनिसकेको छ कि उनलाई आलोचना गर्नै हुन्न, आलोचना कत्ति पनि मन पर्दैन । मंगलबार मात्रै रिपोर्टस क्लबको साक्षात्कारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत शनिबार नागरिक समाजको कार्यक्रमप्रति कटाक्ष गर्दै आयोजक र सहभागीको खिल्ली उडाए । उनले भने –‘बुद्धिजीवी मोडरेटर क्या स्याट्ण्डर्ड । ओ हो ...... डबलीमा लगेर हुर्मत लिने काम । संकट होला केपी प्रचण्डलाई प¥या होला । देशलाई के मा संकट प¥यो ? तनखा आएन कि जागिर गयो कि ? मजदुर किसान संविधान व्यवस्थालाई के मा संकट प¥यो ? कोही विमारी त म देख्दिन ।’ उनी यतिमा मात्र सीमित भएनन अझ अगाडि बढेर भने – ‘यो देश प्रचण्डका लागि सती जानुपर्ने हो ?’
तर चित्रबहादुर केसीको भनाइमा एउटा पार्टीभित्रको झगडाको सिकार सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसद र देशका नेता बनेका छन । उनी भन्छन – ‘पार्टीको झगडाको परिणाम राष्ट्र जनताले व्यहोर्नुपर्ने ? देश अहिले दिशाविहीन भएको छ । अहिले सरकारमा बसेकालाई नराम्रो लाग्ला तर फेरि मुलुकप्रति गमनतिर लैजाने योजना छ ।’
केही दिनअघि पुष्पकमल दाहालले आफूले तत्कालीन नेकपा पार्टीभित्र पेश गरेको १९ पेजको दस्तावेज पार्टीभित्रको बुर्जुवाको हेडक्वार्टर ओलीलाई माओले भनेजस्तो १९ पेजको दस्तावेजको बम हानेको बताएका थिए । तर प्रचण्डको उक्त बमको छर्रा लागेर उनी स्वयं त लडे नै ओलीकाविरोधीपनि ढल्दै गए । अनि ओली भने एटम बमजत्तिकै शक्तिशाली बन्दै गए । जसलाई आलोचकहरु किमपथ भन्छन अर्थात उत्तर कोरियाली शासक किम जोन ऊनपथ । विरोधीको मुखबन्द अनि सत्तामा टिकिरहने टिकाइरहने पथ ।
शुक्रवार, चैत्र २० २०७७०१:४९:२२